Sababihii loo cuskaday ganaaxa Afarta kulan ah ee John Terry oo la shaaciyey. - Caasimada Online
Home Warar Sababihii loo cuskaday ganaaxa Afarta kulan ah ee John Terry oo la...
Sababihii loo cuskaday ganaaxa Afarta kulan ah ee John Terry oo la shaaciyey.
Gudiga madaxa banaan ee Dishibiliinka xiriirka FA-gu ay u saareen arinta John Terry ayaa maanta sii daayey qoraal ka kooban 63 bog oo loo cuskaday ganaaxa afarta kulan iyo 220 kun ee ginni ee la dul dhigay kabtanka Chelsea.
Sida ay gudigu sheegeen ka dib markii ay daawadeen muuqaalo ku cel celis ah Terry ayaa lagu helay inuu Anton Ferdinand u adeegsaday areyo u qornaa sida tan “f***ing black c***” intii ay socotoay ciyaar u dhexeysay QPR iyo Chelsea bishii October ee sanadii lasoo dhaafay.
Gudiga aya sheegay inaysan eraryadaasi aheyn kuwo la qaadan karo, balse Terry oo in badan Is difaacay ayaa qirtay inuu keliya isagu ula jeeday su’aal uu u maleeyey inuu weydiiyey Aston inuu ka jawab bixiyo.
Balse qoraalka maanta la baahiyey ayaa sheegaya in John uu adeegsaday earayaadaas oo ah kuwo isir naceyd ah, taasoo ugu dambeyn lagu ganaaxay afar kulan iyo 220 kun oo ginni.
“Waxaan daawanay muuqaalkii dhacdadaas laga duubay dhowr jeer. Ka hor inta uusan Terry ereyada ku hadlin waxaa laga dheehan karaa isagoo dhoolacadeynaya, waxaana uu durbadiisa wajigiisa isku bedely qof careysan.” Sidaasi waxaa lagu qoray maqaalka maanta lasii daayey.